Maqaallada ku saabsan Mareykanka
Codso fiisaha Mareykanka
November 18, 2020 Maitri Jha USA, fiisada
Dadka adduunka badankood waxay rabaan inay booqdaan USA hal mar noloshooda. Barta ugu muhiimsan ee dalbashada fiisaha Mareykanka waa inaad tikit u hesho dal gaar ah oo aad booqato. Mid ayaa laga yaabaa inuu leeyahay sababo kala duwan
Dalbo fiisaha Mareykanka ee Kuuriyada Koofureed
October 26, 2020 Karuna Chandna USA, fiisada
Waa maxay Visa Mareykanka? Muwaadin ajnabi ah oo raba inuu galo Mareykanka ayaa sida caadiga codsada fiisaha Mareykanka. Oggolaanshaha safarka ee ay soo saartay waddan muwaadinimo safarka, marka hore. Socdaal kasta oo ajnabi ah wuu u qalmi karaa
Us fiisada Shiinaha
October 22, 2020 Antika Kumari USA, fiisada
Howlgalka Mareykanka ee Shiinaha wuxuu fahamsan yahay in dad badan oo fiisooyinka dalbaday ay bixiyeen khidmadda ka shaqeynta codsiyada fiisaha. Waxayna kaliya sugayaan ballanta fiisaha oo loo ballamay. Isku kalsoonow, dhanka kale, in howlgalka Mareykanka uu kordhin doono
Fiisaha Mareykanka ee Hindida
October 11, 2020 Antika Kumari USA, fiisada
Inta badan adeegyada fiisaha soogalootiga caadiga ah, Safaaradda Mareykanka ee New Delhi. Qunsuliyadii Mumbai ayaa wali xiran. Safaaradda New Delhi waxay wali ku shaqeysaa fiisooyinka IH-3 ee korsashada. Codsadayaasha Visaha aan Muhaajiriinta ahayn ee Mareykanka Waa mas'uuliyadda Safaaradda
Aaway Disneyland? dhammaan Disneylands adduunka oo dhan
October 10, 2020 Karuna Chandna wax in la sameeyo, USA
Disneyland waa meesha adduunka ugu farxadda badan. Beer kasta oo mawduuc leh ayaa sidoo kale loo rogay si ay ugu habboonaato dhaqamada maxalliga ah iyo dhadhanka. Disneyland waxay martida ku farxad gelisaa lix goobood. Labada goobood ee dalxiis ee asalka ah waxay ku yaalliin Mareykanka, Disneyland ee California iyo Walt Disney